Ikhadi likaKumkani weeNgqekembe zeTarot - Khetha Uphawu
Ikhadi likaKumkani weeNgqekembe zeTarot
Intsingiselo yeKhadi leTarot, uthando, ukubuyiselwa umva & Okuninzi x Ikhadi leTarot: UKumkani weeNgqekembe
Amagama angundoqo: Umvuzo, ubuNkokeli, ulungelelwaniso
Isiqinisekiso: Ndikhaliphile, ndigxile kwaye ndigxile.
King of Coins Intsingiselo
Owona mceli mngeni mkhulu wolawulo kunye nolawulo ubonwa kuKumkani weeNgqekembe, emele uqhagamshelo lweenkolelo zethu kunye nokuzabalaza kokomoya ngendlela esifumana ngayo ubukhulu kwihlabathi lokwenyani. Ufuna inkululeko yeemvakalelo zethu, ukubonakaliswa kobugcisa kunye nokonwabela izinto ezibiza imali eninzi, ezinophawu ngokungathi ubonisa ukuba akukho nkohliso iya kwenza. Ukhetho olwenziwe apha ayingomcimbi wodumo kodwa luyinto yokuthetha ngokusulungekileyo, ingxelo yethu yelizwe langaphandle ukuba ibonwe, nokuba inokubangela umona kwabanye kunye nazo zonke iintlobo zentelekelelo kunye nesigwebo. Uhlala ezabalazela phezulu, eqeqeshekile kwaye elungelelaniswe, egxile kwinjongo enenjongo ephezulu kakhulu kunokuba idibana neliso. Unxibelelwano luhamba kakuhle kodwa kuphela nje ukuba lunemveliso, kwaye akukho kuvumelana kuya kwenziwa de kufumaneke umhlaba ophakathi. Isiphelo kuzo zonke iindlela, ulawulo lwemithetho yonke yasemhlabeni, umela isigwebo sokugqibela kunye nesigqibo esenziwe kwaye asiyi kwaphulwa kungakhathaliseki ukuba yintoni na. Unenkani kancinci, uyazi ukuba ukwindawo elungileyo ngexesha elifanelekileyo kwaye zonke iinjongo zakhe zifuna isicwangciso esiluqilima kunye nokuzinikela.
Kubanda kancinci kwaye kungathandeki, uKumkani weeNkozo uhlala ebonakala ehlala kumgama othile kwabanye abantu. Udinga umhlaba wakhe wangaphakathi ukhuselwe ngazo zonke iindleko kwaye unokukhomba ukungakwazi kwethu ukunxibelelana okanye intliziyo evaliweyo esingekayinyibiliki. Likhadi lokhetho olunengqiqo lwezigqibo zenyama, kwaye linokubonisa ukungatshati okanye ukhetho olwahlula unxibelelwano lweemvakalelo kwihlabathi lenyama. Ithwele undoqo wamandla engqondo obudoda. Uqhagamshelo oluza kuba novelwano kunye nokuxhasa ngeendlela zethenda kunokuba nzima ukufumana ulwaneliseko lwabo apha, ngaphandle kokuba uMphefumlo womntu uhlanjululwe kwaye ulungele ukuguga kwaye uhlise izikhuselo ezingasayi kusebenzela impilo-ntle yawo.
UKumkani weeNkozo uyayazi indlela yokumisa izimvo zakhe kwaye ilizwe lakhe lengqondo lityebile ngomxholo ongakholelekiyo onokuthi usetyenziswe ngokwenyani. Zonke iinzame zekhondo lomsebenzi nelikhadi elibandakanyekayo ziya kuba neziqhamo kwaye zibonakale lula, njengoko izicwangciso zethu zimi kwaye siyayazi indlela yokuthatha indima yobunkokeli. Impumelelo ephezulu isendleleni njengoko sigxile kwaye sizimisele ukuphumelela, ngandlela zonke. Ubudlelwane nabanye kufuneka bugcinwe kumgama okhuselekileyo kwaye uzinzile ukusixhasa kwiingcamango zethu, ukuze siphumelele kwaye sinyuke phezulu kwinqanaba lobuchwephesha. Ibonisa umphumo oncomekayo wezakhono zokuncokola esizisebenzisayo kanye ngexesha elifanelekileyo, kwaye ukukwazi kwethu ukuthethathethana kunokuzisa umvuzo omtsha ngendlela yethu.
Xa amandla amaninzi etyalwe kwizisombululo ezinengqiqo kunye neenjongo zengqondo, iinkolelo zethu zidala umsantsa phakathi kwemizimba yethu kunye nendlela esicinga ngayo. Xa sivalelwe kwiimfuno zethu zokwenyani kwaye sizama ukuhlonipha ulwazi lwengqondo malunga nomzimba, sinokuphela kuzo zonke iintlobo zeengxaki zempilo ezingenakuchazwa ngamayeza. NgoKumkani weeNkozo kufundo lwethu lwezempilo, siyacetyiswa ukuba sizive into esiyifunayo, siphumle ngokwaneleyo, senze umthambo ngokwaneleyo, kwaye sitye into eziva ilungile endaweni yokusukela nje into eyaziwa njengesempilweni. Ifuna unxibelelwano olusulungekileyo lolwazi kunye nemvakalelo yokwenyani esiyiphetheyo ngaphakathi.
UKumkani weeNgqekembe ezibuyiselwe umva
Isetingi eguqulweyo yeKing of Coins ngokuqhelekileyo ibonisa inkani kunye nengqondo enengqondo enzima engabandakanyi iimfuno zeemvakalelo kunye nokusebenzisana nabanye abantu. Kuya kufika xa sinzima kakhulu ukuba samkele iinketho eziguquguqukayo kwaye sibandakanye abantu esisebenza nabo okanye abantu esibakhathalele kakhulu, kwiimpumelelo zethu kunye neenkqubo zangoku. Sisikhumbuzo sendlela yethu yomntwana kwabanye kunye nentembeko ekufuneka sibenayo ukuze saneliswe ziziphumo esikwaziyo ukuzenza, ngenye indlela okanye enye. Nakwisikhundla salo esijikiweyo, eli khadi libonisa ubutyebi kunye nendlela eyakhayo kwinyani, kodwa ngaphandle kokuhamba ngokweemvakalelo, aliyi kuzisa ulwaneliseko esilufunayo ukuba asinamntu wokwabelana naye okanye uthumo lokwenyani lwentliziyo yethu emiselwe thina. injongo yokugqibela.
King of Coins Ixesha Line
Ixesha elidlulileyo - Ngeli khadi kwixesha lethu elidlulileyo, sikwazile ukwenza into ngomsebenzi wethu kunye nehlabathi lethu lezinto ezibonakalayo ezimangalisayo ngokwenene kwaye kunokwenzeka ukuba into esiyidingayo namhlanje lixesha lokuphumla. I-Iertia inokusithatha inyathelo elinye kakhulu, de silibale ngeemfuno zethu zomzimba nezeemvakalelo, sibambelele kwiimpumelelo esele zifikelelwe endaweni yokunyuka ukusuka kwisiseko abasidalile.
Nikela -Inkosi yeeNkozo iza kufundo lwangoku xa sikulungele ukwenza nantoni na efunekayo ukuqhubela phambili kwinjongo. Bubume besenzo esinengqiqo kodwa sisekelwe kwisiseko, xa sinokuvavanya amandla ethu kunye nobuthathaka bethu ngokucacileyo, kwaye sibheke kwizinto esifuna ukuzisukela ngokulula, inyathelo ngenyathelo. Iinkqubo zokuqonda zihambelana nehlabathi lokwenyani kwaye akusekho mfihlakalo kwizenzo ekufuneka zithathwe ukuze sifikelelwe kwiindawo zethu.
Ikamva - Indlela eya ekwenziweni kwezinto zobutyebi bengqondo yethu iya kucinywa, kwaye ngeli khadi kwikamva lethu, ngokucacileyo sisendleleni yokucoca ukwenza indawo yesikhundla esinamandla seSelf. Iziphumo kunye neminqweno yayo inokuza kuphela xa siye sajongana neemvakalelo ezihlala zisiphosa ukusuka elunxwemeni ukuya elunxwemeni, zisiphazamisa kwiminqweno yethu yokwenyani kunye neenzame zokuyila ezenzelwe ukusisa apho sifuna ukuya khona. Hlanza ukuze usebenzise ixesha kunye nezixhobo zakho ngobulumko ngokusemandleni, ngoko unokuhamba ngokukhululekileyo nangokuzithemba ukuya kwinjongo.
Iiary Khetha Uphawu Isagittarius Aries Gemini